Barashada Baybalka (Bible Study) - Somali Believers
Hits: 3199 2 Comments Continue reading
Hits: 4349 0 Comments Continue reading
Posted by	Abdi Duale on	 Thursday, 26 September 2013 in Barashada Baybalka (Bible Study)
Kunkii sanno ee la soo dhaafay waxaa dhacay oo weli dhacaya dil iyo baaba’a badan. Ma jirto maalin aynaan maqlin war laga naxo oo ku saabsan dil, dhaawac iyo burbur loo geysto dad aan waxba galabsan oo meel adduunka ah ku nool. Waxay tani aad uga sii dartaa oo u sii foolxumaataa marka ay kuwa xasuuqyada noocan oo kale ah sameeyaa ku andacoodaan inay jihaad ugu jiraan magaca Ilaahay daraadiis. Bal ka feker nimankii “crusaders” la odhan jirey, Taalibaanta Afgaanistaan, Alqaacida, iyo xasuuqii ugu dambeeyey ee ka dhacay Westgate, Nairobi ee ay Alshabaabta Soomaaliya sheegteen.
Haddaba sidee ayuu Ciise u arkaa dagaalka quduuska ah ama waxa ay dad ugu yeedhaan jihaadka? Sidee ayuu u arkaa in dad magaca Ilaahay lagu dilo? Jihaadku ma mid ruuxiyan ah baa mise waa mid jidh ahaaneed? Sidan ayaa Ciise ku yidhi Injiilka sida uu Luukos u qoray 12:51-53:
“Miyaad u malaynaysaan inaan u imid inaan nabad dhulka siiyo? Waxaan idinku leeyahay, Maya, laakiinse kalasoocid. Waayo, intii haddeer ka dambaysa waxaa guri ku jiri doona shan kala soocan, saddex laba ka gees ah iyo laba saddex ka gees ah. Waa kala soocmayaan, aabbe wiil ka gees ah iyo wiil aabbe ka gees ah, hooyo gabadh ka gees ah iyo gabadh hooyadeed ka gees ah, soddoh afadii wiilkeeda ka gees ah iyo afadii wiilkii soddohdeed ka gees ah.”
Ciise halkan kagama hadlayo UJEEDDADA imaanshihiisii, laakiinse wuxuu ka hadlayaa MAXSUULKA ka dhalanaya imaanshihiisa. Meel kale adiga oo aan aadin weydii Soomaali kasta oo Masiixi ah: dilka, nacaybka, takooridda iyo dhibaatooyinka kale ee ay kala kulmaan dadkooda marka ay iyagu Masiixa raacaan. Ciise wuu ogaa in marka ay xertiisu isaga rumeeyaan oo ay Boqortooyada Ilaahay adduunka ka aasaasayaan ay mucaarid kala kulmi dooneen kuwa aan Ilaahay rumaysnayn. Tani waa xaqiiqo. Ciise xertiisa kuma odhanayo idinkuna sidooda oo kale sameeya, laakiinse wuxuu u sheegayey inay taas ogaadaan, oo u dulqaataan iyaga oo Ilaahay kaalmaysanaya.
Ciise halkan kuma sheegayo dagaal ka dhan ah qolo khaas ah ama diin khaas ah. Kani maaha dagaal seef la qaadanayo oo dad la laynayo. Xaqiiqdii markii keliya ee mid xertiisii ahi seef la soo baxay Ciise wuu canaantay isaga, “Oo bal eeg, mid ka mid ah kuwii Ciise la jiray ayaa gacanta fidiyey, oo seeftiisa soo bixiyey, oo wuxuu ku dhuftay wadaadka sare addoonkiisii, oo dheg buu ka gooyay. Markaasaa Ciise ku yidhi, Seeftaada meesheedii ku celi, waayo, kuwa seefo qaada oo dhammu seef bay ku halligmi doonaan” (Matayos 26:51-52).
Baybalku wuxuu meel kale si cad ugu sheegayaa inuu cadowgeena ugu weyni shaydaanka yahay, sidaas daraadeed uu dagaalkeenu yahay mid ruuxiyan ah: “Waayo, innagu lama legdanno bini-aadan, laakiinse waxaynu la legdannaa kuwa madaxda ah iyo kuwa amarka leh iyo taliyayaasha dunida gudcurka ah iyo ruuxyada sharka ah oo samooyinka ku jira” (Efesos 6:12). Oo maadaama u kani dagaal ruuxiyan ah yahay hubka aynu qaadanaynaa waa inuu noqdaa hub ruuxiyan ah, sida uu Baybalku inoo sheegayo. Waa inuu hubkeenu noqdo, Erayga Ilaahay, Ruuxa Quduuska ah, rumaysad, xaqnimo, iyo duco (Efesos 6: 13-18).
Haddaba waa maxay qaar kamid ah xooggagan sharka ah ee ay tahay inaynu la dagaalanaa? Aynu ka bilowno Todobada Dembi ee dilaaga ah ama ugu xunxun: Isla weynaanta, Jacaylka maal adduun iyadoo Ilaah la ilaawayo, Galmada xaaraanta ah, Cadhada, Cirweynaanta, Xaasidnimada, iyo Caajisnimada. Waxaynu kuwan ku dari karnaa hooyada sharka oo dhan oo ah caddaalad-darrada. Haddii aynu kuwan la dagaalano, markaa waxaynu dagaalamaynaa dagaal quduus ah ama jihaad.
Ilaahay ha idin barakeeyo oo qalbigiina nabad ha geliyo.
Hits: 2433 1 Comment Continue reading